Ny efatra tamin’ireo zaza no voalaza fa naolana. Niaiky ny zava-nisy ilay mpampianatra voampanga.
« Fiaraha-miasan’ny sekoly tsy miankina iray amin’ny fikambanana miaro ny zon’olombelona no nahafantarana ny zava-nisy. Tonga tao amin’ilay sekoly iray teny Ankadilalampotsy ny solontenan’ilay fikambanana nanontany ireo ankizy, eo anelanelan’ny 10-14 taona, izay karazana herisetra mihatra amin’izy ireo. An-tsoratra no nanaovana ny valiny ka hatairana ny an’ireo mpanontany sy ny tompon’andraikitry ny sekoly raha nahita ny valin-tenin’ireo ankizy milaza fa naolan-dramose izy ireo », hoy ny iray tamin’ireo ray aman-dreny, omaly teny amin’ny Fitsarana.
Mpampianatra taranja Frantsay ilay voampanga ary manambady aman-janaka. 35 taona izy. Niaiky ny heloka vitany izy tamin’ny famotorana ka naiditra am-ponja vonjimaika.